विचार – Rajmarg Online
अब खाँचो पुरुष सचेतनाको
होमनाथ तिमल्सिना, शुरुमा तपाईहरुलाई म एउटा तथ्य प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । सिन्धुपाल्चोक घर भएकी एक महिला काठमाडौँ नया बसपार्कमा मरणासन्न अवस्थामा भेटिनुभयो । हेर्दा गर्भवती झैँ देखिनुहुन्थ्यो । उहाँको पेट ठुलो थियो । मानवसेवा आश्रमको टोलीले उद्दार गरी उपचारका लागि वीर अस्पताल लगे । परीक्षण गर्दा गर्र्भवती नभइ किड्नीको कारण उहाँको...
प्रधानमन्त्री ओलीलाई गोविन्द केसीको जबाफः मेरो उपचार खर्च म आफैँ बेहोर्छु
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण भएपछि टिचिङ्ग अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत डा गोविन्द केसीले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ ब्यहोर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले ट्वीट गर्दै उनलाई शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए भने उनको उपचार खर्च सरकारले जिम्मा लिने बताएका थिए । जबाफमा डा केसीले सरकारले नागरिकप्रतिको आफ्नो...
जीतसागर जी.एम. दाङ, २३ कार्तिक। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्रको एउटा वस्ती खुमखानी । भौगोलिक हिसावले विकट वस्तीका रुपमा रहेको खुमखानीमा पुग्ने लामोसमय देखिको चाहाना यहि कार्तिक २१ गते शुक्रबार दिन पुरा गर्ने अवसर मिल्यो । वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा दुवैमा रहनुभएका तुलसीपुर–७ जीतपुर निवासी उपेन्द्र पौडेलले दुखमा परेका नागरिकलाई केहि सहयोग गर्ने भएपछि हामीलाई पनि खुमखानी...
माया ठकुरी : अर्थात् दुःख र पीडाको अर्को नाम
घोराही, २२ कार्तिक । पाल्पा अर्गेलीका बासिन्दा हुन् माया ठकुरीका बुबा गोपालजंग राणा । उनले जिन्दगीको लामो कालखण्ड भारतीय सेनामा सेवा गरेर बिताए । सेनामा भर्ना हुने क्रममा उनले आफ्नो नाम गम्भीरसिंह ठकुरी लेखाएका थिए । करिब पैँतीस वर्षको उमेरमा रुकुमकोटका राजखान्दान समुद्र मल्लकी नौवर्षीया छोरी देवीसँग विवाह गरेका हुन्...
कोरोनाले थिलोथिलो अर्थतन्त्र उकास्न युवाको भूमिका
घोराही, २२ कार्तिक । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने अभियानमा अस्थिर राजनीतिबाट स्थाई बन्ने मोडमा पुगेको नेपाल आज विश्वभर नै पीडित र प्रभावित बनेको नोबेला कोरोना विरुद्ध लड्न बाध्य छ । सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक विकास र परिवर्तनका वाहकको रूपमा उठेका युवाहरूलाई यो परिस्थितिमा चिन्तित बनाएको छ । सबै खालका...
राहदानी सिरानीमा पौरख आफ्नै राजधानीमा
दाङ, १५ कार्तिक । ‘लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणाको निर्णयसँगै पासपोर्ट थन्काएर व्यवसायमा जुटेको छु’, राप्ती गाउँपालिका वडानम्वर २ का जगत खनालको भनाइ हो यो । बैदेशीक रोजगारका क्रममा मलेसियामा एक दशक बिताउनुभएका खनालले आफ्नो क्षेत्र प्रदेशको राजधानी भएसँगै स्वदेशमै केही गरौं भन्ने निर्णयमा पुगेर पासपोर्ट थन्काएर किराना पसल सुरु गरेको...
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिरहेकाले उपत्यकावासीले सकेसम्म टीका लगाउन ठूलाबडाकहाँ नजाने र जानैपर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्न जनस्वास्थ्यविद्ले सल्लाह दिएका छन् । यस वर्ष सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिरहेकाले फोन वा भिडियो कलबाट आफूभन्दा ठूलासँग आशीर्वाद लिन सकिने जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा रवीन्द्र पाण्डे सल्लाह दिन्छन् । (more…)...
न्यायको सन्दर्भमा राजपुरबासीले कुनै गुनासो गर्नु भएको छैन : उपाध्यक्ष यादव
दाङ, २७ असोज। निर्वाचित पश्चात् जनप्रतिनिधि स्थानिय तहमा आएको करिब तिनवर्ष पुरा भयो । सबै स्थानिय तहका उप–प्रमुख वा उपाध्यक्षलाई न्यायक समितिको संयोजक तोकिएको छ र न्यायक समितिको संयोजकको रुपमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ । यो तिनवर्षको दौडानमा न्यायक समितिमा रहेर के कस्ता काम गर्नुभयो, कति वटा मुद्दा मिलाउनु...
“राजधानीको सवालमा पार्टीको कारवाही सहन तयार छु, तर नजायज कुरा मान्दिन।”
दाङ, २० असोज।नेपाली काँग्रेस दाङबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले राजधानीको सवालमा पार्टीले ह्विप जारीगरेपनि त्यो आफुले नमान्ने स्पष्ट पारेका छन् । काँग्रेस दाङवाट निर्वाचित एक्ला सांसद चौधरीले नजायज कुरामा यदी पार्टीले ह्विप जारी गरेपनि त्यो क्रस गर्ने जानकारी दिए ।‘राजधानीको पक्षमा मतदान गर्दा पार्टीको ह्विप मान्न सकिदैन,’ चौधरीले भने ‘ बरु पार्टीको कारवाही सहन तयार छु, तर नजायज कुरामान्न सकिन्न।’ उनले दाङको भालुवाङलाई राजधानी बनाउने सवालमा पार्टीको ह्विप मान्न नसकि र त्यसका लागि पार्टीको जस्तो कारवाही भोग्नपनिआफु तयार रहने स्पष्ट पारे । उनले दाङको देउखुरी क्षेत्र हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश राजधानीको लागि उपयुक्त स्थान रहेको बताए । प्रदेश सांसद चौधरीले आफुसहित पश्चिम क्षेत्रका काँग्रेसका ६ जना सबै सांसदले दाङको पक्षमा मतदान गर्ने जानकारी दिए । रुपन्देही र त्यसआसपाका जिल्लाका प्रदेश सांसदहरुले भने राजधानी सार्न नपाइने भन्दै व्यापक विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरु मध्यकेहीले सोमवार सदनमै तोडफोड समेत गरेका थिए । ...
बहसको विषयः राजधानी या संघीयता ?
घनश्याम अस्तित्व अढाई बर्ष अघिसम्म मलाई पनि लाग्थ्यो, राजधानी दाङ बनोस् । यसका पछाडि मलाई व्यक्तिगत रुपमा कुनै स्वार्थ थिएन । थियो भने पनि त यत्ति सोंच्थेः प्यूठानबाट नजिक र घोराहीमा अध्ययन मेरो । ‘भालुवाङ’, ‘भालुवाङ’ भनिरहँदा यो बुझौ कि राजधानी दाङलाई नै घोषणा गरिएको हो । केही भूभाग अर्घाखाँची जिल्लाको जोड्नु,...